यौन र जीवन – Dhading's First Online News Portal
एजेन्सी । समाज खुला बन्दै जाँदा अचम्म लाग्दा घटनाहरु बढ्दै जान थालेका छन् । आफ्नो साथीसँग यौन सम्बन्ध राख्न नमानेपछि एक श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीमाथि गरेको बर्बरताको घटना सार्वजनिक भएको छ । मध्यरातमा साथीसँग सम्बन्ध बनाउन अस्वीकार गर्दा ती श्रीमानले पत्नीमाथि बच्चाकै सामु नग्न बनाएर कुटपिट गरेका थिए । त्यतिले मात्रै चित्न नबुझेर उनले..
सुखद दाम्पत्य जीवनका लागि पति–पत्नी नग्न भएर सुत्न फलदायी हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । राति नग्न सुत्ने जोडीको दाम्पत्य जीवन मिठासपूर्ण रहने सो अध्ययनको निश्कर्ष छ । एक हजार ४ जोडीमा गरिएको सो सर्वेक्षणमा ५७ प्रतिशतले राति आफू नग्न भएर सुत्ने गरेको र दाम्पत्य जीवन निकै खुशीयालीपूर्ण रहेको बताएका थिए । यसको विपरीत पेन्टी वा अन्य..
धादिङ कारागारका कैदी होटलमा केटी संग मस्ती गर्दै (भिडियो)
धादिङबेसी- धादिङ कारागारका एक कैदी सदरमुकाम धादिङबेसीको एक होटलमा केटी संग मस्ती गरिरहेको भिडियो अहिले भाईरल भएको छ । भिडियो हेर्दा उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने ति कैदीलाई होटलको कोठामा मस्ती गर्न दिंदै प्रहरीहरु भने कोठा बाहिर बसेर मदिरा पिउँदै उनलाई पहरा दिइरहेका छन् । सार्वजनिक भएको भिडियोमा सादा पोसाकका व्यक्तिहरु प्रहरी रक्सी..
सफल यौन सम्बन्धका लागि उचित खानपान
काठमाडौ । यौन कार्य एक शारिरीक संयोग हो । यौन चाहना सामान्य शारिरिक प्रवृति पनि हो । वैवाहिक जिवन सुखी र सफल हुन सहवासले महत्वपुर्ण भुमिका निवाह गर्छ । सहवास वाट आनन्दको अनुभुति प्राप्त मात्र हुदैन शारीरिक सुख साथै स्वास्थमा पनि सकरात्मक परिवर्तन देखा पर्छ । यौन वैवाहिक जीवनको घरातल हो र महत्वपुर्ण क्रियावाट महिला तथा पुरुष दुवैलाई..
यौन कार्यका लागि ‘सेक्स डल” भाडामा लिन पाईने
एजेन्सी। 'सेक्स डल'को वारेमा पक्कै पनि सुन्नु भएको होला, कतिले त देख्नु पनि भएको होला । देख्नु भएको छैन भने अब यौन कार्यका लागि सेक्स डल भाडामा पनि पाईने भएको छ । 'सेक्स डल'को प्रयोग गरेर यौन चाहना पुरा गर्न चाहनेले अब झण्डै ५ हजार नेपाली रुपैयाँ तिरेको खण्डमा एक हप्ताको लागि 'सेक्स डल' भाडामा लिन पाउनेछ । तर त्यस्तो सुविधा नेपालमा होइन ..
जानकारी भएर पनि कमले मात्रै प्रयोग गर्छन् परिवार नियोजनका साधन
काठमाडौं- परिवार नियोजनका बारेमा आम व्यक्तिलाई जानकारी छ तर प्रयोगदर भने न्यून नै रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका सेवा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य विधेयकले यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समेटेको छ। सन् २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार परिवार नियोजनका बारेमा ९० प्रतिशतभन्दा माथिलाई..
मानिसको उमेरले यौन सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । उमेर सँगै यौन क्रियाकलापमा अर्थात रोमान्चकता र आनन्ददायक अनुभवमा असर पर्ने हुन्छ । उमेर अनुसार कुन उमेरमा अथवा कुन उमेर समुहमा मानिसको यौन सक्षमता बढी हुन्छ भन्ने कौतुहल हुनु स्वभाविक नै हो । एक यौन खेलौना उत्पादक कम्पनीले अनलाइन मार्फत अध्ययन गर्दै कुन उमेरको यौन सम्बन्ध बढी..
चिसापानीगढी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चराको उत्कृष्ट वासस्थान
चितवन - चितवनको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने चिसापानीगढी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चराको उत्कृष्ट वासस्थान रहेको भन्दै चरा विज्ञरुले सो क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उक्त क्षेत्र चराका दृष्टिले विश्वकै नमूना रहेको भन्दै चराविद् डा हेमसागर बरालले बषौँसम्म नदेखिएका चरासमेत सो क्षेत्रमा पाइएको बताए । ‘सरकारले..
हामीले आफूभन्दा सम्मानित मानिसलाई नमस्कार गर्दछौ । सामान्यतया नमस्कार सम्मानको सूचक हो । हिन्दू धर्म अनुसार नमस्कारको महत्व व्यापक छ । भगवानलाई पूजा गर्दा समेत नमस्कार अनिवार्य रुपमा गरिन्छ । यसकारण नमस्कारले केही न केही अर्थ राख्दछ । नमस्कार हामीले जो-कोहीलाई गरिदैन व्यक्ति विशेषलाई मात्र नमस्कार गरिन्छ । आफूले..
घरभित्र प्रवेश गर्नुअघि जुत्ता चप्पल फुकाल्नाले स्लिम बन्न सहयोग गर्ने एक अध्ययनले सुझाएको छ । यसरी जुत्ता बाहिर फुकाल्दा हर्मोन परिवर्तन गर्न सक्रिय हुने रसायनहरू घरभित्र प्रवेश गर्न नपाउने पोर्चुगलस्थित युनिभर्सिटी अफ एभियोरो र युनिभर्सिटी अफ बेरा इण्टेरियरका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको अध्ययनले देखाएको हो । हाल विश्वमा मोटोपन..
साङ्लाको जुस ! तपाईंपिउन सक्नु हुन्छ ?
हाम्रो घर किचनमा प्राय भेटिने साङ्लो केटाकेटीलाई डर देखाउन प्रयोग गरिन्छ । फोहोर हुने ठाउँमा पाइने भनेर दिङदिङ मान्ने गरिन्छ । तर, छिमेकी राष्ट्र चीनले भने साङ्लाको व्यवसायिक उत्पादन गरी आयआर्जनको स्रोत बनाएको छ । त्यो पनि पेय पदार्थ जुस बनाउनका लागि । चीनको शिचांग शहरमा एक औषधि उत्पादक कम्पनीले प्रत्यक वर्ष पाँच सय करोड..
जेठ २५ र २६ गते थाक्रेमा राष्ट्रिय क्यानोनिङ्ग महोत्सव हुँदै
नेपाल क्यानोनिङ एसोसियसनले आगामी जेठ २५ र २६ गते क्यानोनिङ महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ । धादिङको थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित रानी झरनामा छाँगा महोत्सव गर्न लागेको हो। उक्त छाँगा महोत्सवका लागि जेठ २० देखि २४ गतेसम्म क्यानोनिङ गाइड तालिम हुने संघले जनाएको छ। एसोसियसनले यसअघि सन् २०११ मा पहिलोपटक क्यानोनिङ महोत्सव..